ဂျဝါဟာလာနေရူး - အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ပထမဦးဆုံးဝန်ကြီးချုပ်
နိုဝင်ဘာလ 14, 1889 တွင်တစ်ဦးချမ်းသာကြွယ်ဝရျှမီရီပန်ဒစ်ရှေ့နေ Motilal နေရူးအမည်ရှိနှင့်သူ၏ဇနီး Swaruprani Thussu, သူတို့ကဂျဝါဟာလာအမည်ရှိကောင်လေးတစ်ယောက်ဟာသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးကလေးကကြိုဆိုခဲ့သည်။ အဆိုပါမိသားစုတစ်စု၏အနောက်မြောက်ပြည်နယ်တွေမှာအတွက်အချိန်တွင် Allahabad တှငျနထေိုငျ ဗြိတိသျှအိန္ဒိယ (ယခု Uttar Pradesh ပြည်နယ်) ။ Little ကနေရူးမကြာမီလည်း Illustrious အလုပ်အကိုင်များခဲ့နှစ်ဦးစလုံးအဘယ်သူကို၏ညီအစ်မနှစ်ယောက်ကလာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။
ဂျဝါဟာလာနေရူးပုဂ္ဂလိကကျူရှင်ဆရာများသည်ဖွငျ့ထို့နောက် governesses နေဖြင့်ပထမဦးဆုံးအိမ်မှာပညာတတ်များနှင့်ခံခဲ့ရသည်။
ဘာသာတရားအတွက်အလွန်နည်းနည်းအတိုးယူပြီးနေချိန်မှာသူကအထူးသဖြင့်, သိပ္ပံမှာလွန်ကဲ။ နေရူးအတော်လေးအစောပိုင်းအသက်တာ၌အိန္ဒိယအမျိုးသားရေးဖြစ်လာပြီးနှင့်ရုရှားကျော်ဂျပန်ရဲ့အောင်ပွဲများကဝမ်းသာပီတိခဲ့သည် Russo-ဂျပန်စစ်ပွဲ (1905) ။ အဲဒီအဖြစ်အပျက်ကိုအိပ်မက်မက်ဖို့သူ့ကိုသတိပေးခံရ "ဥရောပများ၏ thraldom ကနေအိန္ဒိယလွတ်လပ်မှုနှင့်အာရှလွတ်လပ်ခွင့်၏။ "
16 နှစ်အရွယ်မှာနေရူးဟာဂုဏ်သိက္ခာ Harrow ကျောင်း (အချိန်မှာလေ့လာဖို့အင်္ဂလန်သို့သွားကြ၏ Winston Churchill ရဲ့ Alma mater) ။ ရုက္ခဗေဒ, ဓာတုဗေဒနှင့်ဘူမိဗေဒ - နှစ်နှစ်အကြာ 1907 ခုနှစ်, သူ 1910 ခုနှစ်တွင်သူကသဘာဝသိပ္ပံအတွက်ဂုဏ်ထူးဘွဲ့ယူဘယ်မှာ Trinity College, Cambridge, ဝင်ကြ၏။ အဆိုပါလည်းသမိုင်း, စာပေနှင့်နိုင်ငံရေးတွင် dabbled ငယ်ရွယ်အိန္ဒိယအမျိုးသားရေးအဖြစ် Keynesian သည်သူ၏တက္ကသိုလ်ရက်ပေါင်းစဉ်အတွင်းဘောဂဗေဒ။
1910 ၏အောက်တိုဘာလအတွက်, နေရူးကသူ့အဘ၏ခိုင်မာသောရပ်တည်ချက်မှာ, ဥပဒေလေ့လာဖို့ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့ Inner Temple ကဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ဂျဝါဟာလာနေရူး 1912 ခုနှစ်တွင်ဘားမှဝန်ခံခဲ့သည် ဖြစ်. , သူသည်အိန္ဒိယမြို့ပြ Service ကိုစာမေးပွဲဖြေဆို ယူ. ခွဲခြားဆက်ဆံမှုဗြိတိသျှကိုလိုနီဥပဒေများနှင့်မူဝါဒများကိုဆန့်ကျင်တိုက်ထုတ်ရန်သူ၏ပညာရေးကိုအသုံးပြုဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
သူကအိန္ဒိယမှပြန်လာသောအချိန်ကိုအသုံးပြုပုံသူလည်းအချိန်ကဗြိတိန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပညာတတ်လူတန်းစားအကြားရေပန်းစားခဲ့ကြရာဆိုရှယ်လစ်အတွေးအခေါ်များ, ထိတွေ့ခဲ့သညျ။ ဆိုရှယ်လစ် နေရူးအောက်မှာခေတ်သစ်အိန္ဒိယ၏အခြေခံအုတ်မြစ်ကျောက်များထဲကတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်။
သူ Allahabad တရားရုံးချုပ်အတွက်ပညတ်တရား၏တစ်ဝက်နှလုံးအလေ့အကျင့်စတင်ခဲ့ပြီးဘယ်မှာဂျဝါဟာလာနေရူး, 1912 ၏သြဂုတ်လအတွင်းကအိန္ဒိယပြန်သွားကြ၏။
Young ကနေရူးက stultifying နှင့်ရှာဖွေမတွေ့ရှိခြင်း, ဥပဒေရေးရာအလုပ်အကိုင်မကြိုက် "အရသာ။ "
သူကအများကြီးပိုအိန္ဒိယအမျိုးသားကွန်ဂရက် (INC) ၏ 1912 နှစ်ပတ်လည် session တစ်ခုအားဖြင့်မှုတ်သွင်းသဖြင့်, သို့သော် INC ယင်း၏ Elite နှငျ့အတူသူ့ကိုကြောက်ကြ။ နေရူးတို့ကဦးဆောင်သည့် 1913 မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးပူးပေါင်း Mohandas ဂန္ဒီ ဟာဆယ်စုနှစ်ကြာပူးပေါင်းရဲ့ start ထဲမှာ။ လာမယ့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းသူနိုင်ငံရေးကိုသို့ ပို. ပို. ပြောင်းရွှေ့နှင့်ဝေးပညတ်တရား၏လက်မှ။
ပထမကမ္ဘာစစ် (1914-18) ကာလအတွင်းအများဆုံးအထက်-class ကိုအိန္ဒိယလူမျိုးသူတို့မ့်ဗြိတိန်၏မျက်မှောက်၌ပွဲဝင်သောခံစားပင်အဖြစ်မဟာမိတ်အကြောင်းမရှိထောက်ခံခဲ့ကြသည်။ နေရူးသည်ကိုယ်တော်တိုင်ပဋိပက္ခ, ဒါပေမယ့်ဗြိတိန်ထက်ပြင်သစ်၏ထောက်ခံမှုအတွက်ပိုမဟာမိတ်၏ဘေးထွက်အပေါ်တုံ့ဆင်းလေ၏။
ထက်ပိုမို 1 သန်းအိန္ဒိယနှင့်နီပေါစစ်သားပထမကမ္ဘာစစ်အတွင်းမဟာမိတ်အဘို့အရေခြားမြေခြားတိုက်လျက်, အကြောင်းကို 62000 သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ သစ္စာစောင့်သိထောက်ခံမှု၏ဤရှိုးပြန်လာမှာစစ်အုပ်ရ၏တခါများစွာသောအိန္ဒိယအမျိုးသားရေးဝါဒီဗြိတိန်နိုင်ငံအနေဖြင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်မျှော်လင့်ထားပေမယ့်သူတို့ကခါးခါးသီးသီးစိတ်ပျက်ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။
တောင်မှစစ်ပွဲကာလအတွင်းအဖြစ်အစောပိုင်း 1915 အဖြစ်, ဂျဝါဟာလာနေရူးအိန္ဒိယများအတွက်နေအိမ်စည်းမျဉ်းများအတွက်မခေါ်လာတယ်။ ဒါကအိန္ဒိယကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဂုဏ်တော်ဖြစ်, သေးသေး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဟုယူဆလိမ့်မယ်လို့အဓိပ်ပာ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း အများကြီးကနေဒါသို့မဟုတ်သြစတြေးလျလိုပဲ။
နေရူးမိသားစုမိတ်ဆွေတစ်နေဖြင့်တည်ထောင်အားလုံးအိန္ဒိယပြည်ထဲရေးနည်းဥပဒေလိဂ်ပူးပေါင်း Annie Besant , အိုငျးရနှင့်အိန္ဒိယ Self-စိုးမိုးရေးများအတွက်ဗြိတိန်လစ်ဘရယ်များနှင့်ထောက်ခံသူ။ အဆိုပါ 70 နှစ်အရွယ် Besant ဗြိတိသျှအစိုးရကဖမ်းဆီးကြီးမားသောဆန္ဒပြမှုများချက်ချင်း 1917 ခုနှစ်တွင်သူမ၏ထောင်ချခံရသည်ဟုထိုကဲ့သို့သောအစွမ်းထက်အင်အားစုဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆုံး၌, ပြည်ထဲရေးနည်းဥပဒေလှုပ်ရှားမှုမအောင်မြင်ခဲ့ပါ, ထိုသို့နောက်ပိုင်းတွင်ဂန္ဒီရဲ့ subsumed ခဲ့သည် Satyagraha လပ်ြရြားမြ အိန္ဒိယများအတွက်ပြည့်စုံလွတ်လပ်ရေးထောက်ခံသော။
ဤအတောအတွင်း 1916 ခုနှစ်, နေရူး Kamala Kaul လက်ထပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါစုံတွဲသည်နောက်ပိုင်းတွင်ဖြစ်ပေါ်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့သူ 1917 အတွက်သမီးခဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် သူမ၏လက်ထပ်အမည်, အောက်မှာအိန္ဒိယသူ့ကိုယ်သူ၏ အင်ဒီယာဂန္ဒီ ။ 1924 ခုနှစ်တွင်မွေးဖွားတစ်ဦးကသား, ပဲနှစ်ရက်အကြာတွင်သေဆုံးခဲ့ပါသည်။
ဂျဝါဟာလာနေရူးအပါအဝင်အိန္ဒိယအမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားမှုခေါင်းဆောင်များ, ထိုကြောက်မက်ဖွယ်၏အပြီးတွင်ဗြိတိသျှအုပ်ချုပ်ရေးတဘက်၌သူတို့ရပ်တည်ချက်ခိုင်မာ Amritsar အသတ်ခံရမှု 1919 ၌တည်၏။
နေရူး non-ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလှုပ်ရှားမှုသူ၏ထောက်ခံအားပေးမှုများအတွက် 1921 ခုနှစ်တွင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖမ်းဆီးထောင်ချခံခဲ့ရသည်။ 1920 နှင့် 1930 တစ်လျှောက်လုံးနေရူးနှင့်ဂန္ဒီတစ်ခုချင်းစီကိုအရပ်ဖက်မနာခံမှုလုပ်ရပ်များပိုမိုတစ်ကြိမ်ထက်အကျဉ်းထောင်ကိုသွား, အိန္ဒိယအမျိုးသားကွန်ဂရက်အစဉ်အပိုပြီးနီးနီးကပ်ကပ်ပူးပေါင်းခဲ့ကြသည်။
1927 ခုနှစ်, နေရူးအိန္ဒိယများအတွက်ပြည့်စုံလွတ်လပ်ရေးဖုန်းခေါ်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဂန္ဒီအချိန်မတန်အဖြစ်ဤ action ဆန့်ကျင်, ဒါကြောင့်အိန္ဒိယအမျိုးသားကွန်ဂရက်ကထောက်ခံရန်ငြင်းဆိုခဲ့သည်။
တစ်ဦးအပေးအယူအဖြစ်, 1928 ခုနှစ်မဟတ္တမဂန္ဓီနှင့်နေရူးဗြိတိန်နိုင်ငံကကြောင်းနောက်ဆုံးနေ့လွဲချော်လျှင်လွတ်လပ်ရေးစစ်တိုက်ခြင်းငှါအပေါင်နှင့်အတူအစား, 1930 တို့ကအိမ်မှာအုပ်စိုးမှုကိုတောင်းဆိုတဲ့ resolution ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ နှစ်သစ်ကူးဧဝသန်းခေါင်၏လေဖြတ်မှာ, နေရူးအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးကြေငြာခြင်းနှင့်အိန္ဒိယအလံကြီးပြင်းပေါ်နိုင်အောင်ဗြိတိသျှအစိုးရ, 1929 ၌ဤဝယ်လိုအားငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ အဲဒီမှာပရိသတ်ကိုထိုညဉ့်ကိုဗြိတိသျှမှအခွန်ပေးဆောင်ဖို့, အစုလိုက်အပြုံလိုက်အရပ်ဘက်မနာခံမှု၏အခြားလုပ်ရပ်များအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ငြင်းဆန်ဖို့ကတိပြုခဲ့သည်။
အကြမ်းမဖက်ခုခံ၏ဂန္ဒီရဲ့ပထမဆုံးစီစဉ်ထားလုပ်ရပ်အဖြစ်လူသိများ, ဆားလုပ်ချပင်လယ်ရှည်လမ်းလျှောက်ဖြစ်ခဲ့သည် ဆားမတ်လ သို့မဟုတ် Salt Satyagraha မတ်လ 1930. ၏နေရူးနှင့်အခြားကွန်ဂရက်ခေါင်းဆောင်များကဤစိတ်ကူး၏သံသယဖြစ်ကြသည်ပေမယ့်အတူစိတျဝငျစားလှုပ်ခတ် အိန္ဒိယ၏သာမန်လူများနှင့်ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုသက်သေပြခဲ့သည်။ နေရူးသည်ကိုယ်တော်တိုင် 1930 ဧပြီလအတွက်ဆားလုပ်အချို့သောပင်လယ်ရေအငွေ့ပြန်, ဒါကြောင့်ဗြိတိန်ခြောက်လနောက်တဖန်သူ့ကိုမဖမ်းဆီးထောင်ချခံရ။
ဂန္ဒီတစ်ဦးထက်ပိုသောဝိညာဉျရေးရာအခန်းကဏ္ဍသို့ပြောင်းရွှေ့နေစဉ်အစောပိုင်း 1930 စဉ်အတွင်းနေရူး, အိန္ဒိယအမျိုးသားကွန်ဂရက်၏နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်အဖြစ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
နေရူး, 1929 နှင့် 1931 အကြားအိန္ဒိယအတွက် core အခြေခံမူအစုတခုရေးဆွဲအားလုံးအိန္ဒိယကွန်ဂရက်ကော်မတီတို့ကမွေးစားခဲ့သည့် "အခြေခံအခွင့်အရေးနှင့်စီးပွားရေးပေါ်လစီ," ဟုခေါ်။ စာရင်းကောက်ယူအခွင့်အရေးများအနက်လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်, ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်, ဒေသဆိုင်ရာယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဘာသာစကားများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏ဖျက်သိမ်းခဲ့ကြသည် သိုက်မှာ status ကို , ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒနှင့်မဲပေးပိုင်ခွင့်။
ရလဒ်အဖြစ်နေရူးမကြာခဏ "ခေတ်သစ်အိန္ဒိယဗိသုကာ" ဟုခေါ်သည်။ သူကများစွာသောအခြားကွန်ဂရက်အဖွဲ့ဝင်များကဆန့်ကျင်ရာဆိုရှယ်လစ်ဝါဒ၏ပါဝင်မှုများအတွက်အခက်ခဲဆုံးစစ်တိုက်ကြ၏။ နောက်ပိုင်း 1930 နှင့်အစောပိုင်း 1940 စဉ်အတွင်းနေရူးလည်းအနာဂတ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ-ပြည်နယ်၏နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒရေးဆွဲဘို့နီးပါးဝါးတာဝန်ယူရတယ်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နှင့် Quit အိန္ဒိယလပ်ြရြားမြ
ယင်းသည့်အခါ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် 1939 ခုနှစ်တွင်ဥရောပတိုက်တွင်အထဲကဖဲ့ဗြိတိသျှအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရွေးချယ်တင်မြှောက်အရာရှိများတိုင်ပင်ခြင်းမရှိဘဲ, အိန္ဒိယ၏ကိုယ်စားဝင်ရိုးတန်းစစ်တိုက်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ နေရူး, ကွန်ဂရက်နှင့်အတူတိုင်ပင်ပြီးနောက်, အိန္ဒိယဖက်ဆစ်ဝါဒကျော်ဒီမိုကရေစီကိုထောကျပံ့ဖို့ပြင်ဆင်ထားခဲ့တာကြောင့်, ဒါပေမယ့်အချို့သောအခြေအနေများတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးခဲ့ကြသည်သာလျှင်ဗြိတိသျှအကြောင်းကြားခဲ့သည်။ အရေးအပါဆုံးဗြိတိန်နိုင်ငံကမကြာမီစစ်အုပ်ရ၏အဖြစ်အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ပြည့်စုံလွတ်လပ်ရေးပေးရန်မယ်လို့ကတိပြုရမည်ဟုဖြစ်ခဲ့သည်။
ဗြိတိသျှ Viceroy, သခင် Linlithgow, နေရူးရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေမှာရယ်။ Linlithgow မွတ်ဆလင်အဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်မှအစားလှည့် Muhammad Ali Jinnah ဟုခေါ်တွင်စေရန်, သီးခြားပြည်နယ်တို့အတွက်ပြန်လာအတွက်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့မွတ်စလင်လူဦးရေကနေဗြိတိန်စစ်တပ်ထောက်ခံမှုကတိထားတော်တဲ့သူ, ပါကစ္စတန် ။ အဆိုပါအများအားဖြင့်-ဟိန္ဒူအိန္ဒိယအမျိုးသားနေရူးအောက်မှာကွန်ဂရက်နဲ့ဂန္ဓီတုန့်ပြန်ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏စစ်အားထုတ်မှုနှင့်အတူ Non-ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏မူဝါဒကြေညာခဲ့သည်။
ဘယ်အချိန်မှာ ဂျပန် အရှေ့တောင်အာရှထဲသို့တွန်းချ, စောစော 1942 ခုနှစ်တွင်အများစု၏ထိန်းချုပ်မှုကို ယူ. , မြန်မာနိုင်ငံ အပေါ်သော, (မြန်မာ) ကဗြိတိသျှအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ အရှေ့ပိုင်းအိမ်တံခါးသည်အပူတပြင်းဗြိတိသျှအစိုးရကအကူအညီများအတွက်တခါထပ် INC နှင့်မွတ်စလင်အဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကိုချဉ်းကပ်။ Churchill နေရူး, ဂန္ဒီနှင့် Jinnah နှင့်အတူစေ့စပ်ညှိနှိုင်းဖို့, Sir ဖြတ် Cripps စေလွှတ်ခဲ့သည်။ Cripps အပြည့်အဝနှင့် prompt ကိုလွတ်လပ်ရေးမဆိုထည့်သွင်းစဉ်းစားအတိုအဘို့စစ်အားထုတ်မှုကိုထောကျပံ့ဖို့လိုလားတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဂန္ဒီစည်းရုံးသိမ်းသွင်းနိုင်ဘူး; နေရူးအလျှော့ပေးလိုက်လျောဖို့ပိုပြီးဆန္ဒရှိခဲ့တယ်, ဒါကြောင့်သူနဲ့သူ့ဆရာတစ်ဦးကယာယီရေတံခွန်-ထဲကပြဿနာကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံက "အိန္ဒိယ Quit ။ " ရန်အဘို့အ 1942 သြဂုတ်လမှာတော့ဂန္ဒီသည်သူ၏ကျော်ကြားသောခေါ်ဆိုခထုတ်ပေး နေရူးဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဗြိတိန်များအတွက်ကောင်းစွာသွားမခံခဲ့ရကတည်းကအချိန်တွင်ဗြိတိန်နိုင်ငံကဖိအားပေးဖို့တွန့်ဆုတ်ခဲ့ပေမယ့် INC ဂန္ဒီရဲ့အဆိုပြုချက်ကိုလွန်။ တုံ့ပြန်မှုများတွင်ဗြိတိသျှအစိုးရကဖမ်းဆီးနေရူးနှင့်ဂန္ဒီနှစ်ဦးစလုံးအပါအဝင်တစ်ခုလုံးကို INC လုပ်ငန်းကော်မတီ, ထောင်ကျ။ နေရူးဇွန်လ 15, 1945 သည်အထိနီးပါးနှစ်တွင်သုံးနှစ်အဘို့ထောင်ထဲမှာဆက်ရှိနေလိမ့်မယ်။
partition နှင့်ချုပ် Ministership
စစ်ပွဲဥရောပမှာကျော်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဗြိတိန်ကဉျြးထောငျကနေနေရူးဖြန့်ချိ, သူသည်ချက်ချင်းအိန္ဒိယ၏အနာဂတ်အပေါ်ညှိနှိုင်းမှုအတွက်သော့ချက်အခန်းကဏ္ဍမှစတင်ခဲ့သည်။ အစပိုင်းတွင်သူသည်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တစ်အများစု-ဟိန္ဒူအိန္ဒိယနှင့်တစ်အများစုမွတ်ဆလင်ပါကစ္စတန်သို့လူမျိုးရေးလိုင်းများတလျှောက်တွင်တိုင်းပြည်ကိုဝေဖို့အစီအစဉ်ကိုဆန့်ကျင်ပေမယ့်သွေးထွက်သံယိုတိုက်ခိုက်မှုတွေနှစ်ခုဘာသာတရားအဖွဲ့ဝင်များအကြားထွက်ဖဲ့သောအခါ, ထိုတုံ့အဆိုပါအုပ်စုခွဲဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။
ယင်းပြီးနောက် အိန္ဒိယ Partition ခွဲ , ပါကစ္စတန်သြဂုတ်လ 14, 1947 ရက်တွင် Jinnah ကဦးဆောင်ကာလွတ်လပ်သောနိုင်ငံဖြစ်လာသည်နှင့်အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ဂျဝါဟာလာနေရူးအောက်မှာအောက်ပါနေ့ကလွတ်လပ်သောဖြစ်လာခဲ့သည်။ နေရူးဆိုရှယ်လစ်နှုတ်ဆက်ပြီး, အဲဂုတ္တုနှင့် Nasser အတူစစ်အေးတိုက်ပွဲကာလအတွင်းနိုင်ငံတကာကို non-aligned လှုပ်ရှားမှု၏ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည် Tito ယူဂိုဆလားဗီးယား၏။
ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်, နေရူးအိန္ဒိယတစ်ဦးစုစည်း, ခေတ်မီပြည်နယ်အဖြစ်သူ့ဟာသူပွနျလညျဖှဲ့စညျးကကူညီပေးခဲ့ကြောင်းကျယ်ပြန့်နှံ့စီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများထူထောင်။ သူအဖြစ်ကောင်းစွာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးမှာသြဇာညောင်းခဲ့ပေမယ့်၏ပြဿနာဖြေရှင်းဘယ်တော့မှနိုင် ကက်ရှမီးယား နှင့်ပါကစ္စတန်နှင့်အတူအခြားအဟိမဝန္တာနယ်မြေအငြင်းပွားမှုများ တရုတ် ။
1959 ခုနှစ်မှာဝန်ကြီးချုပ်နေရူးဟာမှခိုလှုံခွင့်ပေးသနား ဒလိုင်းလားမား နှင့်တရုတ်တို့ဖွင့်ကနေအခြားအတိဘက်ဒုက္ခသည်များ တိဘက်၏ 1959 ကျူးကျော် ။ ဤသည်ထားပြီးဟိမဝန္တာတောင်တန်းအကွာအဝေးအတွင်း Aksai ချင်းနှင့် Arunachal Pradesh ပြည်နယ်ဒေသများသို့မတည်မငြိမ်တောင်းဆိုမှုများရှိခဲ့ရာနှစ်ခုအာရှအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကြားတင်းမာမှုများဖြစ်စေခဲ့သည်။ နေရူး 1959 ခုနှစ်တွင်စတင်, တရုတ်နှင့်အတူအငြင်းပွားနယ်စပ်တစ်လျှောက်တွင်စစ်ရေးတပ်စခန်းအားမရ, သူ့ရှေ့သို့ပေါ်လစီနှင့်အတူတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။
အောက်တိုဘာလ 20, 1962 တွင်တရုတ်နိုင်ငံ, အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့်အတူအငြင်းပွားနယ်စပ်တလျှောက်တွင် 1000 ကီလိုမီတာဆိတ်ကွယ်ရာနှစ်ခုအချက်များမှာတစ်ပြိုင်နက်တိုက်ခိုက်မှုစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ နေရူးကိုယ်ရံတော်ကိုချွတ်ဖမ်းမိ, နှင့်အိန္ဒိယစစ်ရေးရြှုံးတစ်စီးရီးခံစားခဲ့ရခဲ့သည်။ နိုဝင်ဘာလ 21 အသုံးပြုပုံတရုတ်က၎င်း၏အမှတ်လုပ်သောခံစားခဲ့ရနှင့်တဖက်သတ်မီးငွိမျးလေ၏။ ဒါဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံထိန်းချုပ်ရေး၏လိုင်းတစ်လျှောက်၎င်း၏ရှေ့ဆက်ရာထူးကနေမောင်းထုတ်ခဲ့ မှလွဲ. စစ်ပွဲမတိုင်မီကဲ့သို့တူညီသောပွညျ၏ဌာနခွဲထွက်ခွာ၎င်း၏ရှေ့ဆက်ရာထူးကနေနုတ်ထွက်သွားကြသည်။
နီးပါး 1400 ဦးသေဆုံးနှင့်အတူ 10000 12000 မှတပ်ဖွဲ့များအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အင်အား, တရုတ်-အိန္ဒိယစစ်ပွဲအတွင်းမိုးသည်းထန်စွာဆုံးရှုံးမှု, 1700 ပျောက်ဆုံးနေတဲ့နှင့် 4000 နီးပါးကိုတရုတ်များ၏ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်တို့ကရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်ဦးသေဆုံးပြီး 722 ဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းနှင့်အကြောင်းကို 1,700 ဒဏ်ရာရ။ အဆိုပါမမျှော်လင့်ဘဲစစ်ပွဲနှင့်အရှက်ရှုံးနိမ့်အလှနျစိတျဓာတျန်ကြီးချုပ်နေရူးနှင့်များစွာသော သမိုင်းပညာရှင် ဟာထိတ်လန့်သူသေဆုံးအလျင်အမြန်ကြစေခြင်းငှါအခိုင်အမာပြောဆိုသည်။
နေရူးရဲ့ပါတီ 1962 ခုနှစ်မှာပေမယ့်အရင်ကထက်မဲသေးငယ်ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အတူအများစုမှရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ သူ့ကျန်းမာရေးပျက်ကွက်စတင်, သူသည်ကျန်းမာပြန်ဖို့ကြိုးစားနေ, 1963 နဲ့ 1964 ခုနှစ်ကာလအတွင်းကက်ရှမီးယားအတွက်လအတော်များများကြာအောင်။
သူဟာလေဖြတ်ခံစားခဲ့ရပြီးတော့မေလ 27 သူ၏အနံနက်အပေါ်တစ်ဦးနှလုံးရောဂါကြောင့်မွန်းလွဲပိုင်းကွယ်လွန်သွားဘယ်မှာနေရူး, 1964 မေလအတွက်ဒေလီသို့ပြန်သွား၏။
အတော်များများကလေ့လာသူများပါလီမန်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးမျှော်မှန်းထားသည် အင်ဒီယာဂန္ဒီ ကသူကိုကြောက်ရွံ့ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်သူမ၏မှအတိုက်အခံထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သော်လည်းသူမ၏ဖခင်အောင်မြင်ဖို့ရန် "မင်းဆက်။ " အင်ဒီရာသို့သော်ထိုကာလမှာ post ကိုချလှည့်နှင့် Lal Bahadur Shastri အိန္ဒိယ၏ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်လွှဲပြောင်းရယူခဲ့သည်။
အင်ဒီရာ နောက်ပိုင်းတွင်တတိယဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်, သူ့သားရာဂျစ်ကြောင်းခေါင်းစဉ်ကျင်းပရန်ဆဌမဖြစ်ခဲ့သည်။ ဂျဝါဟာလာနေရူးကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဒီမိုကရေစီ, ထဲမှာကြားနေရေးမှကျူးလွန်သောလူမျိုးကျန်ရစ် စစ်အေးခေတ် နှင့်ပညာရေး, နည်းပညာနှင့်ဘောဂဗေဒ၏စည်းကမ်းချက်များ၌လျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးနေတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ။
ပြင်သစ်သမိုင်းအတွက် Key ကိုအဖွဲ့
အိုင်ယာလန်၏ Big လေ
Dominick Cruz ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိနှင့်ကိုယ်ရေးဖိုင်
ရုပ်ပြစန္ဒယား Chord စာကြည့်တိုက်
ကူး Cannizzaro တုံ့ပြန်မှု
အဘယ်ကြောင့်နတ် Turner ရဲ့ပုန်ကန်စေ White ကတောင်ပိုင်းသားကြောက်ရွံ့ခြင်း
ဂျာမန်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ Pronoun အသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
Carmine '' သုံးမယ့်ကုမ္ပဏီ '' တွေဆီကနေ မှစ. '' The Big Ragoo '' Ragusa နှင့် Janet
အားလုံးအချိန်ထိပ်တန်း 10 မွေးနေ့သီချင်းများ
အဆိုပါ K နှင့်မေးအသံထွက်